Ndị na-emepụta Capacitor Na-ekpo ọkụ Induction na ndị na-ebunye ihe - China Induction Capacitor Factory.
Ihe nkiri Capacitor
DC njikọ Capacitor
Nchekwa ike / Pulse Capacitor
Capacitors na sistemu ike mmeghari ohuru
Ike Ntụgharị Capacitor
Ihe nzacha ike na-arụ ọrụ
Capacitors na-enye ike
Sistemụ ike traktị ụgbọ oloko
Induction kpo oku capacitors
Ngwuputa ike inverter
Ihe nzacha AC
DC njikọ capacitor DMJ-PC
DC njikọ capacitor DMJ-MC
Capacitor ihe nkiri emebere maka defibrillators
Nnukwu ike capacitor maka ike eletrọnịkị
Ike ike emebere nke ọma ejiri na sekit njikọ DC
Igwe ihe nkiri DC dị elu maka ntụgharị ike
UL akwụkwọ ikike ikike ihe nkiri maka nzacha DC (DMJ-MC)
Metalized film capacitor maka ike ọkọnọ applicatio ...
Capacitor Ihe nkiri Metalized Emebere maka Defibrillator ...
Polypropylene Snubber Capacitors eji na elu voltag ...
Elu-klas IGBT Snubber capacitor imewe maka elu po ...
Akwa mma snubber na High pulse ibu ikike
RFM Induction okpomọkụ capacitor
Oke ike: ruo 6000 uF
Oke voltaji: 0.75kv ruo 3kv
A.Ọ dịghị ihe ike n'ibu vibration;
B.ọ dịghị gas na vapors na-emerụ ahụ;
C.no eletrọnịkị conductivity na ihe mgbawa uzuzu;
D.The ambient okpomọkụ nke ngwaahịa dị na nso nke -25 ~ +50 ℃;
E. mmiri jụrụ oyi ga-abụ mmiri dị ọcha, na mmiri okpomọkụ nke ntinye dị n'okpuru 40 ℃.
Igwe ọkụ eletrik jupụtara mmanụ maka ọkụ ọkụ induction
A na-ejikarị ihe ndị na-eme ka mmiri dị jụụ na-achịkwa ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe AC voltaji sistemu nwere voltaji ruru 4.8kv na ugboro ugboro ruo 100KHZ iji meziwanye ihe ike na ọkụ ọkụ, agbaze, mkpali ma ọ bụ nkedo ngwaọrụ na ngwa ndị yiri ya.
Capacitor ọkụ induction emebere ọhụrụ maka ọkụ ọkụ etiti oge
Emebere ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ maka ojiji nke ọkụ induction na ndị na-ekpo ọkụ , iji meziwanye ihe ike ma ọ bụ àgwà sekit.
The capacitors bụ ihe niile-film dielectric nke etinyere na eco-enyi na enyi, na-adịghị egbu egbu biodegradad mmanụ mkpuchi.Emebere ha ka mmiri dị ndụ dị ndụ (ikpe nwụrụ anwụ na arịrịọ).Multi ngalaba nhazi (ịpịpị) na-enyere elu ugbu a loading na n'iji ya gee ntị resonance sekit bụ ọkọlọtọ atụmatụ.Ọnọdụ ihu igwe akwadoro na eruba mmiri dị ezigbo mkpa.
Mmiri jụrụ oyi capacitor maka induction akụrụngwa kpo oku
Jenụwarị 04, 22
Idu ụzọ gaa n'ọdịniihu - 202...
Disemba 31, 21
Ndewo, 2022!Ezi afọ ọhụrụ!
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Wuxi CRE New Energy Technology Co., Ltd.
Ekwentị: 0086 18362396881
adreesị: Ụlọ D, No.789 NanHu Avenue, Liangxi District, Wuxi City, Jiangsu Province, China 214000